carbon monoxide naxaas (ii) xabagta copper carbon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Equation CO + CuO → Cu + CO2
Waa maxay xaalada falcelinta CO (carbon monoxide) ee uu kula falgalo CuO
Heerkulka: 250 - 450 ° C
Ku afuuf CO gaaska qulqulka Cu
Dhacdada CO (carbon monoxide) ka dib waxay la falgashaa CuO (Copper(ii) oxide)
Heerkulka sare, CO wuxuu yareyn karaa oksaydh badan oo bir ah oo ay ku jiraan CuO
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CO + CuO → Cu + CO2
naxaas (ii) xabagta ammonia copper biyaha nitrogen
(ka) (jacayl, daacadnimo) (D) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CuO (Copper(ii) oxide) ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Cu (naxaas) iyo H2O (biyaha) iyo N2 (nitrojiin)?
NH3 waxay marto CuO kululeysa
Dhacdada ka dib CuO (copper(ii) oxide) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cu (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu (naxaas) badeecad ahaan?
naxaas (ii) xabagta hydrogen copper biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CuO + H2 → Ku + H2O
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu (naxaas) iyo H2O (biyaha)?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CuO + H2 → Ku + H2O
What are the chemical and physical characteristic of Cu (hydrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu (naxaas) badeecad ahaan?